एक पौंडी पोखरी संग अन्तर-पानी मा आराम। मूल्य 2021। बच्चाहरूको पोखरी।
अतिथि घरथोटेल LIDIYA
स्वागत छ, प्रिय पाहुना!
अतिथि प्रबन्धक "M'lag"
"रोय" - अन्तर-पानी
"क्रुज": तालमा आराम गर्नुहोस्
"EDEM" - पूरै परिवारका लागि प्रमोदवन केन्द्र
दुर्भाग्यवश, हाम्रो साइटमा क्षणमा तपाईं यस आवास विकल्प उमाल्न सक्नुहुन्न। चिन्ता नलिनुहोस्, तपाईं नजिकका धेरै विकल्पहरू फेला पार्न सक्नुहुनेछ।
एडेटेड शटल। एयरपोर्ट शटल सेवाहरू थप मूल्यमा उपलब्ध छन्। यो अर्को चरणमा अनुरोध गर्न सकिन्छ। एयरपोर्ट
कालो समुद्रको पश्चिम किनारमा तपाईंलाई स्वागत गर्न हामी इमान्दारसँग खुशी छौं "M'lag" m'lg "!
जीवित आंगन सडक अनन्त, दोस्रो तटरेज, समुद्री किनारमा 200 मिटर (केन्द्रीय वर्ग) मा 20 मिनेट पैदल छैन , बालुवाको केन्द्रीय समुद्र तटको सुरूआत अघि - 20 मिनेट पैदल यात्रा (50000 मिटर), चट्टान कोस्टको सुरूवात अघि, 0000 मिटर (बलौटे सानो समुद्र तट)।
तपाईं शहरी र हल्ला हाउसबाट आराम गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो विशिष्ट सुविधा सबैभन्दा वातावरण मैत्री र सुन्दर स्थान ईन्ट्री पानीमा स्थान हो। साथै, हामी गाउँको अन्तरविद्ले ठूलो हरित क्षेत्रको साथ आधुनिक अतिथि गृहहरू हौं।
<< p> हामी तपाइँ र तपाइँका बच्चाहरूलाई शान्त बनाउँछौं र तपाईंको बच्चाहरूलाई शान्त, शोर डिस्क, बारहरू र वाटरफ्रन्टमा रमाइलो गर्नुहोस्।
हामी हाम्रो काममा मन पराउछौं र गर्व गर्दछौं र यहाँ तपाईंको रहस्य तपाईंको रहस्य आरामदायक र रमाईलोको रूपमा छ। हामी तपाईंलाई हाम्रो नियमित अतिथिहरू बीच देखेर खुशी हुनेछौं!
, Yyarllgach को मोल, jiarluchate र yaryluchach ताल, तेर कब्रिस्तान र पीच ग्रिभहरू। दान्टलाल यातना अन्तर मा गाउँ भनिन्छ। पेन्सन र मनोरन्जन केन्द्रहरू एक सभ्य मात्रामा प्रस्तुत गरिन्छ, तर सबै भन्दा राम्रो पाँच!
<< p> यस अतिथि आश्रय रिसोर्टको पश्चिमी आधा मा अवस्थित छ - सडकमा। Anornth खान कोहान सुल्तान। उहाँ अरूको दर्जनौंको छेउमा हुनुहुन्छ। यहाँबाट समुद्र केवल 200 मिटर मात्र हो। मनोरन्जन केन्द्रले 1- पोषणको भवन (2-कोठा सुविधाहरू) र बंगलाहरू (1-कोठा कोठा) मा आवास प्रदान गर्दछ। ती प्रत्येकले एक पृथक बाथरूम, ओछ्यान, कुलहरू, फ्रिज, टिभी र वातानुकूलित समावेश गर्दछ। शक्ति - समय। नवसे एक आश्चर्यको लागि पर्खिरहेका छन् - आरक्षित पसा लाउन्ज।
ul को दक्षिणी सुझावमा कलरहरू। सोभियतले निजी क्षेत्रका बीचमा घाइते, "क्रूज" भनियो। यहाँ वर्षी राउन्डको लागि पर्खिरहेका पाहुनाहरू। स्थान पानी सवारी, डिस्क र पसलहरूको नजिक छ। 100 मिटर जानको लागि कम्फलको फाटकको ढोकाबाट, केवल 700 मिटर जानको लागि एस्टेटले विभिन्न कोटीहरूको अवगतकता प्रतिनिधित्व गर्दछ - "अर्थतन्त्र" बाट "लेशन" बाट "ल Lillain ्ग" बाट।
<< p> तिनीहरू क्षेत्र र फर्निचरको संख्यामा फरक छन्, तर सबैलाई बाथ, शटरूम फर्निचर, वातानुकूलित र फ्रिजरमा सामान्य छ। टिभीहरू जताततै छन्, "अर्थशास्त्रीहरू" बाहेक (तिनीहरूका बासिन्दाहरूले सामान्य लबीमा केबल टेलिभिजन हेर्न सक्छन्)। मनोरन्जनबाट - "संगीतत्मक" खाने कोठा - मार्ग पोषण, एक क्याफुटी बार र पोखरी।
निर्दिष्ट गाउँले स्पिकरको नाम "एडन" सँग पनि अपार्टमेन्टहरूको लागि प्रख्यात छ। एक स्ट्रिंगी भवनहरू एक दुई तर्फी वर्गको साथ गठन। यसको बीचमा - बगैचा, बारबेक्यु क्षेत्र, आत्मा र शौचालय, साना पार्किंग र खेल मैदानको साथ कोठा। मारी-अन्ना बहु स्ट्रियरी सञ्चालित, गल्लीमा पेन्सनबाट अलग गरिएको सबै प्रमोटनीत छ। संस्थाले "अर्थव्यवस्था", "मानक" र "आराम" को प्रकारका पाहुनाहरूलाई पाहुनाहरूलाई प्रस्ताव गर्दछ, ती मध्ये केही दुई-स्तर हुन्। स्थानीय अपार्टमेन्टमा:
होटल "Palyra" p. अन्तर-पानीमा इभ्यापेटेटियाबाट 600 किलोमिटर अवस्थित छ। अन्तर-पानी फराकिलो बलौटे समुद्री किनार, शान्त समुद्र र एक चिल्लो सूर्यास्तको लागि प्रसिद्ध छ जुन बच्चाहरूसँग मनोरञ्जनका लागि सहज छ। होटल रिसोर्ट क्षेत्रको मुटुमा छ।
सिफारिश: अतिथि हाउस डी लारा - पारिवारिक बिदाको लागि उत्कृष्ट विकल्प - मनोरञ्जन नजिकै बच्चाहरूको लागि आराम गर्दै! सुन्दर र आध्यात्मिक होणिजहरू, ठूलो सुन्दर इलाका, एक तातो पोखरी, मनोरन्जनको लागि सहज क्षेत्रहरू रमाईलो र यादगारमा तपाईंको रहन्छ।
होलमा आधारित, बच्चाको खेल क्षेत्र, पसल, बाइक भाडामा समूहको सेट गर्दा त्यहाँ क्याप तार्खान्कारमा मिनी-एक्स्सन हो।